Shirka madasha qaran ee Muqdisho oo maanta dib u furmi doono iyo arrimaha looga hadli doono (AKHRISO) - Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Shirka madasha qaran ee Muqdisho oo maanta dib u furmi doono iyo arrimaha looga hadli doono (AKHRISO)
Waxaa maanta lagu wadaa in magaalada Muqdisho uu markale dib ugu furmo shirka madasha wadatashiga qaran oo ay yeelanayaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka.
War-murtiyeed ay dhawaan si wadajir ah usoo saareen madaxda madasha qaran ayaa lagu sheegay in shirka maanta furmanaya looga hadli doonno saamiga xubnaha Aqalka sare ay ku yeelan doonaan dadka dega gobolada Sool iyo Sanaag, kaas oo uu muran badan ka taagan yahay.
Waxaa sidoo kale, la filayaa in shirka looga hadlo goobta rasmiga ah oo lagu dooran doonno xubnahaasi ka imaanaya gobolada Sool iyo Sanaag, kaas oo mudooyinkii ugu dambeysay uu muran badan ka taagnaa.
Xildhibaanada Aqalka sare ee gobolada Sool iyo Sanaag ayaa waxaa ka taagan halka rasmiga ah ee lagu dooran doonno, maadaama Puntland ay ku doodeyso in labadaasi gobol uu maamulkeeda hoos-yimaado islamarkaana ay mudan tahay in lagu soo doorto magaalada Garoowe.
Dhinaca kale, maamulka Khaatumo State oo ka mid ah maamulada ka jira dalka ayaan weli wax aqoonsi ah ka helin dowladda dhexe ee Soomaaliya, iyadoona maamulkaasi uu dowladda ku eedeynayo inay ku dhaqmeyso sharci darro middii ugu xumeyd islamarkaana xaquuqdii dadka dega gobolada Sool iyo Sanaag ay ku raali gelinayso maamulka Puntland.